မျက်တောင်အတုဆက်တာနဲ့ ရိုးရိုးမျက်တောင်အတုတပ်တာမှာ ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်သင့်လဲ? - For her Myanmar
မျက်တောင်အတုဆက်တာနဲ့ ရိုးရိုးမျက်တောင်အတုတပ်တာမှာ ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်သင့်လဲ?
နှစ်ခုလုံး အတုတွေပဲဆိုပေမဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားကတော့ ကွာကြပါတယ်…
လူဆိုတဲ့အမျိုးကတော့ ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ အသားအရောင်မရွေး လှချင်ပချင် အနည်းဆုံးတော့ ကြည့်ကောင်းချင်တတ်ကြတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ရွေးချယ်စရာတွေ အရမ်းများပြီး အပြိုင်အဆိုင်များလာတဲ့ခေတ်မှာတော့ သူ့ထက်ငါလှချင်ကြတာ သိပ်ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း လှဖို့အတွက်ဆို အချိန်က ပေးရသေးတော့ အချိန်မရှိတဲ့လူက မလှရဘူးလား ဆိုတဲ့ ဝယ်သူရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေ ထပ်များလာတာမို့ အချိန်တိုတိုအတွင်း အလှဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် အမျိုးမျိုးတီထွင်လာကြပါတယ်။ အဲ့အထဲမှာ မျက်တောင်အတုဆက်တဲ့နည်းလမ်းကလည်း ၂၀၁၈ ကနေစပြီး လူပြောများလာတဲ့ အရာတစ်ခုပေါ့။
အရင်ဆုံး မျက်တောင်ဆက်တာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ မျက်တောင်ဆက်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းမျက်တောင် တစ်မွေးချင်းစီကြားမှာ မျက်တောင်လေးတွေကို တစ်ပင်ချင်းစီ စိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့မျက်တောင်ပုံစံ၊ အနေအထားကိုမူတည်ပြီး ပုံမှန်၊ ခပ်ထူထူ၊ 3D၊ 6D စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်စရာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နော်။
နောက်ပြီး မျက်တောင်ကိုလည်း ဆံပင်အစစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့မျက်တောင်မွေး၊ မျက်တောင်အစစ်နီးပါးတူအောင် လုပ်ထားတဲ့ မျက်တောင်မွေး၊ ရိုးရိုးကော်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မျက်တောင်မွေးဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် ပြန်ခွဲထားပါသေးတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပေါ့ပါးမှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနဲ့ ပုံစံကတော့ ကွာသွားတာပေါ့နော်။
ဒီမျက်တောင်ဆက်တာကတော့ တစ်ခါလုပ်ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီး ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်လောက်အထိ ခံပါတယ်။ ခဏလေးအချိန်ပေးရုံနဲ့ ၁၀ ရက်လောက် လှလှပပနဲ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ အေးဆေးနေရမှာမို့ စိတ်ပင်ပန်း သက်သာတာပေါ့။ အားနည်းချက်ကတော့ သူက နည်းနည်းလေး ဈေးကြီးမယ်၊ နောက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ဆရာမနဲ့ မတွေ့တာမျိုး၊ သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေက ပေါချောင်ကောင်း အစုတ်အပဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုရင်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်ရင်လည်း ဈေးကြီးလို့ မဖြုတ်ရက်၊ မဖြုတ်ဖြစ် တိုင်တွေကို ပတ်ရော။
Related Article >>> မျက်လုံးပုံစံကိုလိုက်ပြီး မျက်တောင်အတု ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ရွေးကြမယ်
မျက်တောင်အတုတပ်တာကတော့ ယောင်းလေးတို့ သိကြတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ရှိရင်းစွဲ မျက်တောင်ကိုပဲ အတုကပ်လိုက်တာပေါ့။ သူကလည်း ဈေးနှုန်းကို လိုက်ပြီး ဆံပင်မွေးအစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစား၊ အစစ်နီးပါးတူအောင် လုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစား၊ ရိုးရိုးကော်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အမျိုးအစားဆိုပြီး ကွဲပြားတဲ့အပြင် ပုံမှန် Natural look,ထူစေတဲ့ Volume Look, 3D, 6D စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်စရာတွေလည်း ရှိသေးတာမို့ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့အပြင်အဆင်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
မျက်တောင်အတုတပ်တဲ့အခါမှာ အားသာချက်ကတော့ နေ့တိုင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကို အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရမယ်၊ ဈေးလေး နည်းနည်း ပိုသက်သာမယ်၊ နောက်ပြီး ကော်ကအစ ကပ်တဲ့အချိန်အဆုံး အားလုံး ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်မို့ စိတ်ချရမယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်အရမ်းကုန်တဲ့အတွက် မနက်ရုံးသွား၊ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ယောင်းတွေအတွက်တော့ တကယ့်အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
Related Article >>> မျက်တောင်တုကို စနစ်တကျ ခွာကြမယ်
အဲ့တော့ ဘယ်ဟာကို ရွေးသင့်လဲ?
ကိုယ်က ဘတ်ဂျတ်ကိုလည်း ပုံမှန်လောက် သုံးနိုင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်မခံချင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ မျက်တောင်ဆက်တာကိုရွေးပါ။ ကျွမ်းကျင်ပြီး ယုံကြည်ရတဲ့လူဆီမှာပဲ ဆက်ဖြစ်ဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်နော်။
ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘက်ဂျက်ချိန်ရတဲ့အနေအထား ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ကအလှအတွက်ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲနေနေ၊ စိတ်ဝင်စားတယ် စိတ်လည်းရှည်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်တောင်အတုတပ်တာက ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။
နှဈခုလုံး အတုတှပေဲဆိုပမေဲ့ ဒီဇိုငျးကာလာ အနအေထားကတော့ ကှာကွပါတယျ…
လူဆိုတဲ့အမြိုးကတော့ ကြား၊မ၊ အသကျအရှယျမရှေး၊ အသားအရောငျမရှေး လှခငျြပခငျြ အနညျးဆုံးတော့ ကွညျ့ကောငျးခငျြတတျကွတာပါပဲ။ အထူးသဖွငျ့ ရှေးခယျြစရာတှေ အရမျးမြားပွီး အပွိုငျအဆိုငျမြားလာတဲ့ခတျေမှာတော့ သူ့ထကျငါလှခငျြကွတာ သိပျပွီးတော့ ထူးဆနျးတဲ့ ကိစ်စမြိုး မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေဲ့လညျး လှဖို့အတှကျဆို အခြိနျက ပေးရသေးတော့ အခြိနျမရှိတဲ့လူက မလှရဘူးလား ဆိုတဲ့ ဝယျသူရဲ့တောငျးဆိုမှုတှေ ထပျမြားလာတာမို့ အခြိနျတိုတိုအတှငျး အလှဆုံးဖွဈဖို့အတှကျ အမြိုးမြိုးတီထှငျလာကွပါတယျ။ အဲ့အထဲမှာ မကျြတောငျအတုဆကျတဲ့နညျးလမျးကလညျး ၂၀၁၈ ကနစေပွီး လူပွောမြားလာတဲ့ အရာတဈခုပေါ့။
အရငျဆုံး မကျြတောငျဆကျတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ရှငျးပွခငျြပါတယျ။ မကျြတောငျဆကျတယျဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့မူရငျးမကျြတောငျ တဈမှေးခငျြးစီကွားမှာ မကျြတောငျလေးတှကေို တဈပငျခငျြးစီ စိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျလိုခငျြတဲ့မကျြတောငျပုံစံ၊ အနအေထားကိုမူတညျပွီး ပုံမှနျ၊ ခပျထူထူ၊ 3D၊ 6D စသညျဖွငျ့ရှေးခယျြစရာ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျနျော။
နောကျပွီး မကျြတောငျကိုလညျး ဆံပငျအစဈနဲ့ လုပျထားတဲ့မကျြတောငျမှေး၊ မကျြတောငျအစဈနီးပါးတူအောငျ လုပျထားတဲ့ မကျြတောငျမှေး၊ ရိုးရိုးကျောနဲ့လုပျထားတဲ့ မကျြတောငျမှေးဆိုပွီး အဆငျ့ဆငျ့ ပွနျခှဲထားပါသေးတယျ။ ကိုယျရှေးခယျြတဲ့အပျေါမှာ မူတညျပွီး ပေါ့ပါးမှု၊ သကျတောငျ့သကျသာရှိမှုနဲ့ ပုံစံကတော့ ကှာသှားတာပေါ့နျော။
ဒီမကျြတောငျဆကျတာကတော့ တဈခါလုပျပွီးရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ထိနျးသိမျးမှုအပျေါမှာမူတညျပွီး ၂ ပတျကနေ ၃ ပတျလောကျအထိ ခံပါတယျ။ ခဏလေးအခြိနျပေးရုံနဲ့ ၁၀ ရကျလောကျ လှလှပပနဲ့ စိတျခမျြးခမျြးသာသာ အေးဆေးနရေမှာမို့ စိတျပငျပနျး သကျသာတာပေါ့။ အားနညျးခကျြကတော့ သူက နညျးနညျးလေး ဈေးကွီးမယျ၊ နောကျပွီး သငျ့တျောတဲ့ ဆရာမနဲ့ မတှတေ့ာမြိုး၊ သုံးတဲ့ပစ်စညျးတှကေ ပေါခြောငျကောငျး အစုတျအပဲ့ဖွဈနတောမြိုးဆိုရငျလညျး အန်တရာယျဖွဈတတျပါတယျ။ အကယျ၍ ကိုယျနဲ့မလိုကျဖကျရငျလညျး ဈေးကွီးလို့ မဖွုတျရကျ၊ မဖွုတျဖွဈ တိုငျတှကေို ပတျရော။
Related Article >>> မကျြလုံးပုံစံကိုလိုကျပွီး မကျြတောငျအတု ဘယျသို့ဘယျပုံ ရှေးကွမယျ
မကျြတောငျအတုတပျတာကတော့ ယောငျးလေးတို့ သိကွတဲ့အတိုငျး ကိုယျ့ရှိရငျးစှဲ မကျြတောငျကိုပဲ အတုကပျလိုကျတာပေါ့။ သူကလညျး ဈေးနှုနျးကို လိုကျပွီး ဆံပငျမှေးအစဈနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ အမြိုးအစား၊ အစဈနီးပါးတူအောငျ လုပျထားတဲ့ အမြိုးအစား၊ ရိုးရိုးကျောနဲ့လုပျထားတဲ့ အမြိုးအစားဆိုပွီး ကှဲပွားတဲ့အပွငျ ပုံမှနျ Natural look,ထူစတေဲ့ Volume Look, 3D, 6D စသညျဖွငျ့ ရှေးခယျြစရာတှလေညျး ရှိသေးတာမို့ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့အပွငျအဆငျကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
မကျြတောငျအတုတပျတဲ့အခါမှာ အားသာခကျြကတော့ နတေို့ငျး ကိုယျကွိုကျတဲ့ပုံစံကို အမြိုးမြိုးပွောငျးလို့ရမယျ၊ ဈေးလေး နညျးနညျး ပိုသကျသာမယျ၊ နောကျပွီး ကျောကအစ ကပျတဲ့အခြိနျအဆုံး အားလုံး ကိုယျ့ခွကေိုယျ့လကျမို့ စိတျခရြမယျ။ အားနညျးခကျြကတော့ အခြိနျအရမျးကုနျတဲ့အတှကျ မနကျရုံးသှား၊ ကြောငျးတကျနရေတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျတော့ တကယျ့အကွီးမားဆုံး စိနျချေါမှု ဖွဈနလေိမျ့မယျ။
Related Article >>> မကျြတောငျတုကို စနဈတကြ ခှာကွမယျ
အဲ့တော့ ဘယျဟာကို ရှေးသငျ့လဲ?
ကိုယျက ဘတျဂတျြကိုလညျး ပုံမှနျလောကျ သုံးနိုငျပွီး အလုပျရှုပျမခံခငျြတဲ့လူဆိုရငျတော့ မကျြတောငျဆကျတာကိုရှေးပါ။ ကြှမျးကငျြပွီး ယုံကွညျရတဲ့လူဆီမှာပဲ ဆကျဖွဈဖို့လညျး အရေးကွီးတယျနျော။
ဒါမြိုးမဟုတျဘဲ ဘကျဂကျြခြိနျရတဲ့အနအေထား ဆိုပမေဲ့ ကိုယျကအလှအတှကျဆိုရငျ ဘယျလိုပဲနနေေ၊ စိတျဝငျစားတယျ စိတျလညျးရှညျတယျဆိုရငျတော့ မကျြတောငျအတုတပျတာက ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျလို့ အကွံပွုပါရစေ။
Tags: better, Condition, extension, Eyelash, Falsies
"မနက်ဖြန် ဝိတ်ချတော့မယ် နှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော နေ့စွဲများ" အပါအဝင် Foodies တို့ရဲ့ အလွဲပေါင်းချုပ်
Hnin Ei Oo March 8, 2019
ဘယ်အချိန်တွေမှာ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ အပြည့်အဝအနားယူသင့်လဲ? ဘာကြောင့်လဲ?
Hnin Ei Oo May 7, 2019
For Her Myanmar January 3, 2019
နားလညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ ခဈြသူတဈယောကျဖွဈလာဖို့ အခွခေံ အခကျြ (၆)ခကျြ
Ei Mon November 13, 2018